Thursday November 03, 2016 - 08:55:17 in Wararka by Super Admin
Markii ugu horraysay hoggaamiyaha xoogaga dowladda Islaamiga ah ayaa ka hadlay duullaanka cadaawadeed oo ay dowladda Mareykanka iyo xulufadeeda shiicada ah ay ku qaadeen magaalada Muusil ee waqooyiga wadanka Ciraaq.
Abuu Bakar Baqdaadi ayaa sheegtay in uu yahay khaliifka muslimiinta sanaddii 2014
Sheekh Abuu Bakar Al-Baqdaadi ayaa kalimad maqal ah oo uu jeediyay wuxuu si qota dheer uga hadlay dagaalka Magaalada Muusil iyo ka qeyb qaadashada dowladda Turkiga ee duullaanada Ciraaq iyo Suuriya.
Shacabka muslimiinta sunniga Ciraaq ayuu ku guubaabiyay in ay ka qeyb qaataan dagaalka lagu difaacayo magaalada Muusil si ay uga badbaadaan xasuuq uga yimaad dhanka maleeshiyaadka shiicada iiraan taabacsan iyo maleeshiyada malaaxidada maamulka Kurdistaan.
Baqdaadi ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka daran ee muslimiinta sunniga Ciraaq ay la kulmayaan iyo sida adduunku isugusoo bahaystay dagaalyahanada maamulkiisa.
Hoggaanka ‘Dowladda islaamiga ah’ ayaa markii ugu horraysay ku dhawaaqay dagaal furan oo kala dhaxeeya dowladda dabadhilifka Turkiga.
Sheekh Abuu Bakar Al-Baqdaadi ayaa dagaalyanada kooxdiisa ugu baaay in ay beegsadaan ciidamada Turkiga ee ku duulay Ciraaq iyo Suuriya.
"Muwaxidiintoow Turkiya maanta waxay soo gashay daa’irada camalkiina iyo mashruuciina jihaadiga ah, ilaahey u kaashada oo ku duula ammaankeeda ka yeela argagax barwaa qadeedana cabsi bah gooya ah, Turkiga ku dara meelaha ay ka socdaan loollanada holcaya” ayuu yiri Hoggaamiyaha xoogaga Dowladda Islaamiga ah.
Sidoo kale dadka ku dhaqan magaalada Muusil iyo dagaalyahanada kooxda ayuu uga digay in ay ka firxadaan jiidda dagaalka wuxuuna ku guubaabiyay in ay adkeystaan oo ay rawaafidda iyo cadawga kale ee huwanta ah ka difaacaan magaalada.
Siyaasi Cali Khaliif Gallayr oo ku dhintay magaalada Jigjiga.
Ciidamada Alsiisi oo dad shacab ah ku dilay Waqooyiga dalka Masar.